Famerenana ny horonantsary 'The Craft' an'i Blumhouse dia nanamboatra sarimihetsika - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Famerenana ny horonantsary 'The Craft' an'i Blumhouse dia nanamboatra sarimihetsika
Famerenana ny horonantsary 'The Craft' an'i Blumhouse dia nanamboatra sarimihetsika
by Trey Hilburn III Febroary 18, 2020
nosoratan'i Trey Hilburn III Febroary 18, 2020
Blumhouse's The Craft reboot dia namono tifitra. Tsy iza izany fa i Jason Blum tenany ihany.
Rehefa nanontaniana momba The Craft avy amin'i TooFab.com, nilaza i Blum fa mbola tsy nahita ny sarimihetsika izy ary tsy mahalala na inona na inona momba an'io amin'izao fotoana izao. Nilaza tokoa izy fa hahita izany mandritra ny roa ka hatramin'ny telo herinandro.
Na dia mety tsy hain'i Blum aza ny inona The Craft reboot mitazona, mpilalao sarimihetsika Michelle monaghan naka fotoana fohy tany amin'ny Twitter ary nilaza izany momba ny fandraisany anjara.
Hilaza reimagining aho. Zoe dia tena mahira-tsaina fotsiny ary fotoana nahafinaritra fotsiny teo amin'io seta io. Mahatalanjona, fa tena ara-potoana sy mifandraika amin'ny resaka momba azy sy ny fomba namerenany an'io sary io. Ary i Blumhouse ary efa ela aho no te hiara-hiasa amin'i Jason ka nahafinaritra ahy ny niara-niasa taminy farany.
Ny mpilalao ho an'ny The Craft ny famerenana dia ahitana an'i Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine, Michelle Monaghan ary David Duchovny.
Na inona na inona majika nataon'i Blumhouse The Craft, dia zavatra izay andrasako fatratra.
Ahoana ny hevitrareo lahy? Faly amin'ny famerenana indray? Faly miverina mitsidika The Craft? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Ny sary 'zoma faha-13' dia mampiseho izay mety ho endrik'i Jason tamin'ny andiany CW
Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 2-18-20